Xildhibaan Dowladda Farmaajo ku eedeeyay inay xariir la leedahay Al-shabaab | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Xildhibaan Dowladda Farmaajo ku eedeeyay inay xariir la leedahay Al-shabaab
Xildhibaan Dowladda Farmaajo ku eedeeyay inay xariir la leedahay Al-shabaab
Xasan Cabdi Ismaaciil (Xasan Yare) oo ka tirsan Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Somaliya ayaa si kulul kaga hadlay weerarka uu dhiigga badani ku daatay, ee maalin ka hor Ururka Al Shabaab ku beegsadeen Hotel Cas Casey ee Magaalada Kismaayo.
Xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil ayaa si cad u sheegay in ay tuhmayan xiriir Dowladda Federaalka Somaliya kala dhaxeeya maleeshiyada Ururka Al Shabaab.
“Khilaafka siyaasadeed ee xilligan ka dhex jira Dowladda Federaalka iyo Jubbaland in dadka laga mashquuliyo xaaladda kale iyo waxaan tuhmeynaa in Shabaab iyo Villa Somalia uu xiriir ka dhaxeeyo oo xaalada taagan in qalqal amni laga abuuro Kismaayo.” Ayuu yiri Xildhibaan Xasan Yare oo la hadlay Universaltv.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay raggii weerarka soo qaaday in ay wateen dareyska cusub ee Ciidamada Booliska Somaliya, kuwaa oo sida uu sheegay Ciidamada Booliska ay Dowladda Federaalka ugu qaybisay Xarunta School Polizio.
“Dharka ay wateen afarta nin ee weeraray Hotelka wuxuu ahaa dharkii Booliska Federaalka ee ugu dambeeyay oo lagu qaybiyay School Polizio, mid waa is qarxiyay, labo waa la dilay, hal nin gacanta lagu hayaa.” Ayuu yiri Mudanaha Baarlamaanka Somaliya ka tirsan.
Waxaa uu ku celceliyay ka Xildhibaan ahaan marka aad fiiriso qaabka uu weerarka u dhacay iyo sida loo soo abaabulay in uu jiro xiriir ay wadaagan Dowladda Dhexe iyo Ururka Al Shabaab.
“Aniga ka Xildhibaan ahaan waxaa tuhmayaa oo aan aaminsanahay dharka ay wateen, qaabka loo abaabulay, sida Madxatooyada u fikireyso iyo Hay’adaha ammaanka halkaas ka jira inuu jiro tuhun xiriir ka dhaxeeya Al-Shabaab iyo Madaxtooyada.” Ayuu yiri Xildhibaan Xasan Yare.
Previous articleFaa Faahin: Qarax ka dhacay Dhuusamareeb
Next articleLafta-gareen oo la kulmay Wafdi ka socda QM iyo DF